विश्वकपमा झिङ्गा भन्केको जस्तो आवाज किन ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← कम उमेरमै जवान
म खुला किताब हुँ -गायिका निशा सुनार →
विश्वकपमा झिङ्गा भन्केको जस्तो आवाज किन ?
विश्वकपका खेलहरु हेर्ने गर्नुभएको छ भने पक्कै याद गर्नुभएको हुनुपर्छ, खेल हुँदै गर्दा झिङ्गा भन्केको जस्तो भुँSSSS आवाज आएको आयै गर्छ । कतिपय बेला त कमेन्ट्री पनि सुन्न पाइन्न । मैदानको आवाजको त कुरै छाडौँ, कमेन्टेटरको आवाजलाई समेत दबाई दिन्छ यो आवाजले । एकोहोरो भूँSSSS भूँSSSS!!!
के हो त यो ? यो भुभुजेला रहेछ । एक मिटर जति लामो बाजा दक्षिण अफ्रिकामा फुटबल हुँदा फ्यानहरुले बजाउँदा रैछन् । गत वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा कन्फिडिरेसन कप हुँदादेखि यसको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकहरुले सुन्न थालेका हुन् । हामी जस्ता कयौँले भने यही विश्वकपमा यो आवाज सुनेका हौँ। टेलिभिजन प्रसारकहरुले स्टेडियमको प्राकृतिक आवाज सुन्नका लागि राखेका माइकमा भुभुजेलाको आवाज मात्र सुनेको भनी गुनासो गरेका छन् । केही खेलाडीहरुले पनि गुनासो गरेका छन् । तर फिफाका बोस सेप ब्लाटर भने स्थानीय परम्परा भन्दै यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आवाजलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
Sabhar : Mero Sansar